Jaamac Cali Jaamac oo isu rogay afhayeen reer waqooyi.
WQ. Osman Ahmed Sheekh
Waxaad moodaa in dadka reer Puntland ay haysato nasiib daro ah in qofkay doortaanba uu siduu doono u'isticmaalo xilkii loo doortay.
Shalay markii C/laahi Yuusuf diiday inuu xilka wareejiyo waa tii dadka reer Puntland ay ka dhiidhiyeen oo xukunka ka tuureen.
Markaas kadib waatii la qabtay shirkii Garoowe ee lagu doortay jaamac Cali Jaamac,inkastoo muran uu ka taagtaa taas hadana waxaa dad badan oon ku jiro aniguba qabaan in Jaamac ku soo baxay doorasho xaq ah oo si cadaaladi ku jirto weliba u dhacday, inkastoo fikirkaan ay dadku qaarna qabaan inaan wax doorasho la yiraahdaaba meesha kadhicin.
Waxaa nasiib daro noqotay in Jaamac uu dhinac maray rabitaankii shacabka reer puntland kadib markuu si bareera xiriir ula samaystay maamulkii Carta oo inta badan dadka reer Puntland ay ka soo horjeedaan. Jaamac kuma ekaan xiriirkaase misana rafashadiisii markii uu inqilaabay kornayl C/laahi Yuusuf wuxuu sii kordhiyey waa Jaamac Cali Jaamace xiriiradii uu la samaysanayey cid allaale iyo cidii ka soo horjeeda jiritaanka maamulka Puntland oo weliba uu isaguna uu lahaa waxaa u'ahay madaxweyne isagoo xiriir kale la samaystay maamulka aanu jaarka nahay ee Hargaysa,taasoo dadka reer Puntland ku noqotay wax la yaableh oo aysan filayn marna. Waa marka loo fiirsho nooca xiriirkaasi uu ku salaysan yahay oo ah burburinta magaca Puntland ama ku ekaynta maamulkaas degaanada bari, nugaal qaarkeed iyo mudug qaarkeed oo qura uusana sheegan deganada Sool, Sanaag iy Hawd. Wuu sii waday kooxayaysigii oo wuxuu Kenya xiriir la yiraahdo G8 kula samaystay kooxo aan oran karo waaba cadowga koowaad ee shacabkeena ee ay hogaaminayaan ragii ka dambeeyey burburkii iyo barakicii dalka ka dhacay dagaalkii sokeeye, Cismaan caato, qanyare, ina jees iyo dhamaan gacan ku dhiiglayaasha caanka ah.
Markaan leeyahay cadowga ugama jeedo shakhsi ama qabiil gaara ee waxaan uga jeedaa cid kasta oo dhibaataysa shacabka in ay cadow utahay ummada Soomaaliyeed gobol kasta oo ay joogaan,mana aha oo qura codowgu kuwan aan magacyadooda xusaye waanan halkan lagu soo wada koobi karin magacyadooda.
Waxaa wax lala yaabo noqotay nin sheeganaya inuu yahay madaxweyne Puntland oo leh waxaan matalaa shacabka reer Puntland,inuu misna yiraahdo waxaan utacsiyeynayaa dadka ku nafwaayey Dhahar oo waa lasoo weeraray.
Waa wax fiican dhaqanka islaamka qofkii dhinta in loo tacsiyeeyo,laakiin aan is weydiinee Jaamac ma ukuurgalay waxa ka dhacay Dhahar yaa usababa horta?Maxaase keenay dagaalkaas markiisii horeba?.
Dad badan waxaa suurowda inay qoraalkaygan uqaataan inaan ku difaacayo kornayl C/laahi Yuusuf,kuna weerarayo jaamac Cali.Mase ahane xaqiiqdaa ah in khaladka kornayl Jaamac uu yahay mid ku ilowsiinaya khaladka kornayl C/laahi. Waxaa dad badan awal is oran jiray kornayl C/laahi wadani ma ahoo waakan ummada Soomaaliyeed cadow shisheeye ugu yeeraya si loo gumaado oo diintooda iyo dhaqan koodaba loo badalo,kornayl jaamac ayaa ka wadanisan oo had iyo goor difaaca shacabka oo yiraahda dalkeenu ma joogaan argagixiso.
Waxaa maanta cad in hadba kan dhulka yaal ay noqotay qaab siloon oo uu wax ku doono meelkasta ha ugalee. Jaamac Cali Jaamac waxaa dad badani isweydiinayaa ma afhayeen reer waqooyi ayuu noqday oo waa ka tanaasulay sheegashadiisii madaxweynenimada Puntland?.
Mise waxaa ku dhacay cudurkii kursi jacaylkoo sidii kornayl C/laahi waagii cayrinta lagu geeyey Gaalkacyo ee afkiisa wax kale laga waayey aan ahayn argagixisaa joogta Puntland iyo Soomalaiyaba ayuu Jaamacna hada bilaabay markuu quusta soo istaagay oo xitaa shirkii kooxaha dibada looga saaray jileeciisa iyo jahawareerka ku dhacay siyaasadiisa maalinba meel jirta oo reer Puntlandina ay dhan ka noqdeen intooda wadaniga ahi een halbeegoodu uusan qabiil wax ku cabirid ahayn.
Waxaan ahaa taageerayaasha ugu horeeya Jaamac Cali Jaamac,weliba wakiiladiisa dibada kuwa ugu firfircoonaa aanba isfaanshee.
Waxaanse taageeradii kala noqonay aniga iyo inbadan oo taageeri jirtayba ama xilalba uhaysay maamulkiisii,markuu jabshey qaanuunkii Puntland dhinacna maray rabitaanka shacabka Puntland.
Waxaa dadka reer Puntlad tusaale fiican ugu filan hada ka dib ka inay ka fiirsadaan cida ay madax udooranayaan inuu noqdo qof ay ku weyn tahay muwaadinimada oo aan rabitaankiisa ka hormarinayn kan shacabka. Waa in aan ka fogaanaa in aan taageero cid kasta oo xiriir la samaysata cadowga Puntland iyo kan Soomaaliyaba guud ahaan.
Walaalahaya reer waqooyi iyo kuwa koonfureedba waxaa naga dhaxaysa is xurmayn, daris wanaag iyo walaalnimo aan go'ayn marna,hadiise ay ku soo xadgudbaan degaanada Puntland ama ay jabshaan qawaaniinta degaanka, waxaan ubixinaynaa cadowga Puntland waana in laga hortagaa,oo la tusaa in meesha maamul ka jiro oo aysan fowdo ahayn.
Cidii ku taageerta gardarada reer waqooyi ay wadaan sida hada ka muuqata hadalada Jaamac Cali Jaamac ee uu leeyahay Dhahar waxaa ku soo duulay C/laahi Yuusuf. Dhahar waa degaan ka tirsan maamulka Puntland cidii ku soo xadgudubtana waxaan qabaa in talaabo ay ka qaadaan ciidamada daraawiishta ee Puntland. Waxaan qabaa inaysan hawaysan ama laga hor istaago inay wax ka noqoto Puntland hada iyo mustaqbalkaba cidaan wadaniyadu aysan ku fogayn oo xukun jecely uun ay wado.
Ugu dambayn waxaan usoo bandhigayaa su'aal akhristayaasha qoraalkaygan.
Yaa uroon dhulka iyo dadka reer Puntland wadaniyad marka laga hadlayo labada kornayl ee midna leeyahay anaa madax ah iyo anaa madax ah,waa C/laahi Yuusuf Axmed iyo Jaamac Cali Jaamac? dadweynahaan udaayey jawaabta.
Akhristayaasha waxaan ka raali galinayaa wixii khalada ee ay ku arkaan qoralkayga.
Waxaan kaloon usheegayaa in mawqifkaygii aan ka taagnaa siyaasada Puntland uusan waxba iska badalin ee uu sidiisii yahay ahaa,in xukun uu ku jiri karo uun rabitaanka shacabka oo qura.Maya xoog iyo qori caaradii baan ku haysan ama ku qabsan dal iyo dadka deganba.
Faafin: April 16, 2003